अर्जुन–मलाइकाको विवाह स्थगित, परिवारले स्विकारेनन् ? | Makalukhabar.com
भाद्र २५ । साउथ सुपरस्टार प्रभास र श्रद्धा कपूर स्टारर बलिउड फिल्म ‘साहो’ले हिन्दी भर्जनमा १३० करोड ९८ लाख कमाई सकेको छ । तर यो फिल्मले साउथमा खासै राम्रो गर्न सकेन । समीक्षकले पनि फिल्मको निकै आलोचना गरे ।फिल्मको आलोचना हुदाँ पनि लामो समय सम्म टीमले केहि जवाफ दिएनन् । हालै फिल्मका निर्देशक सुजितले... जारी राख्नुहोस...
भाद्र २५, भारत । भारतीय फिल्म क्षेत्रकी चिरपरिचित अभिनेत्री कंगना रनौतलाई फिल्ममा अभिनय काम गर्ने अभिनेत्रीको रुपमा मात्रै होइन सामाजिक परिवर्तनका विविध विषयमा उनले व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिका कारण पनि चर्चामा आउने गर्छिन् । यसैबीच, कंगनाले कावेरी कलिङ अभियानको एक कार्यक्रममा अक्षय कुमारको बारेमा विस्... जारी राख्नुहोस...
सनी देओलले आफ्नै फिल्मबाट छोरालाई डेब्यु गराए (ट्रेलर सहित)
भाद्र २४ । बलिउड अभिनेता सनी देओलका छोरा करण देओल बलिउडमा डेब्यु गर्दैछन् । छोराको डेब्युलाई लिएर सनी उत्साहितको साथ साथै नर्भस पनि छन् । उनी छोराको डेब्युलाई शानदार बनाउनका लागि हरेक प्रयास गरिरहेका छन् ।सनी र करण अहिले फिल्मको प्रमोशनमा व्यस्त छन् । ९० को दशकमा सनीको एक्सन निकै चर्चामा थियो । तर उ... जारी राख्नुहोस...
अक्षय कुमारकाे ५२ औं जन्मदिनमा ‘पृथ्वीराज’को टीजर सार्वजनिक
भाद्र २४, भारत । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको ५२ औं जन्मदिनको अवसरमा ‘पृथ्वीराज’ फिल्मको टीजर सार्वजनिक गरिएको छ । टीजर सार्वजनिक गर्दै फिल्मको औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।चन्द्रप्रकाश द्विवेदीको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्ममा अक्षय कुमार फाइनल भएपनि नायिका फाइनल गरिएको छैन । यो फिल्ममा २०१७ की मिस वर्ल... जारी राख्नुहोस...
तमिलकी बोल्ड आभा किन गुमनाम छिन् ?
भाद्र २३, एजेन्सी । तमिल फिल्मको कुरा गर्दा भारतीय फिल्म क्षेत्रमा छुट्टै स्थान छ । तमिल फिल्ममा चलेकी नायिका हुन् आभा पल । सन् १९८९ मा मुम्बईमा जन्मिएकी आभाले सन् २००५ बाट बलिउडमा पाइला टेकेकी हुन् । वेभ सिरिज गन्दीबातमा समेत रुचाइएकी आभा प्रायः बोल्ड देखिन्छिन् । यीनको कामसुत्र थ्रिडी सर्वाधिक चर्... जारी राख्नुहोस...